Mobdro ma shaqeeyo, kuwani waa beddellada ugu fiican | Androidsis
Mobdro ma shaqeeyo, kuwani waa beddellada ugu fiican
Mobdro waa codsi kuu oggolaaday inaad telefishanka ka daawato aalad kasta oo Android ah, codsi sidoo kale kuu oggolaaday inaad marin u hesho kanaal kasta oo lacag lagu bixiyo iyada oo loo marayo liisaska IPTV. Markii la ii oggolaadayna waxaan u hadlaa sidii Mobpro oo kale aan shaqaynayn ilaa horraantii 2021 ka dib hawlgal ay sameeyeen Europol iyo qaybta dhexe ee dambiyada ee Booliska Qaranka.
Sidii la filayay, codsigan wuxuu joojiyay shaqadii wakhtigaas, markaa uma baahnid inaad raadsato sida looga soo dejisto internetka, maadaama arjiga ku xiran adeegayaasha abuurayaasha si ay u bixiyaan adeegiisa. La'aanta adeegayaashan, dalabku gabi ahaanba waxtar ma leh.
Sababtaas awgeed, waxaan kugula talineynaa inaadan ka raadin iyaga khadka tooska ah, maadaama waxa kaliya ee aad heli doontid ay tahay inaad soo dejiso codsi ku qaad qalabkaaga furin, spyware taasina sidoo kale ma shaqeyn doonto.
Haddii aad raadinayso beddellada madalkan, markaa waxaan ku tusi doonaa Beddelka ugu fiican MobdroBeddelaadyo dhammaystiran oo sharci ah oo waliba kuu oggolaan doona inaad telefishanka ka daawato aalad kasta oo moobil ah, ha ahaato biraawsarka ama adoo adeegsanaya dalabka kala duwan.
3 Eeg La 1, La 2, Qabiil, Teledeporte iyo Kanaalka 24 saacadood
4 Eeg Telecinco, Cuatro, Factoría de Ficción, Boing, Energy, Divinity iyo BeMad
5 Eeg Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Mega iyo Atresseries
Vix waa Taxanaha gebi ahaanba bilaashka ah iyo madal filimada kaas oo laga heli karo Laatiin Ameerika, waxyaabaha laga heli karo Spain iyada oo aan la adeegsan VPN. Inta badan waxa ku jira waxaa loo tarjumay Laatiin Ameerika Isbaanish ama qoraal hoosaadyo Isbaanish ah. Dhammaan waxyaabaha ku jira waxaa lagu kala saaraa kanaallo mowduuc leh oo waxa ay na siiso ayaa aad uga sarreeya waxa aan ka heli karno Pluto TV iyo Rakuten TV.
Vix wuxuu la jaan qaadayaa Chromecast, kaas oo noo oggolaanaya inaan u dirno nuxurka shaashadda weyn ee qolka fadhiga si aan ugu raaxaysanno si aad u raaxo badan. Waxa kale oo loo heli karaa Android TV, Apple TV, iyo Fire TV Stick oo ka socda Amazon.
In kasta oo aan ka heli karno madalkan biraawsar kasta, dukaanka Play -ka waxaan ku haysannaa codsi noo oggolaan doona inaan ku helno dhammaan waxyaabaha ku jira si aad u raaxo badan oo dhakhso badan, codsi aan awoodno kala soo bixi gebi ahaanba bilaash ah iyada oo loo marayo xiriirka soo socda.
VIX - CINEMA. TV. BILAASH.
Developer: Shirkadda VIX Inc.
Photocall.TV waa mareeg noo oggolaanaysa marin u hel dhammaan kanaalada xorta ah ee inta badan waddamada Yurub iyo Ameerika. Laakiin marka lagu daro, waxay sidoo kale noo oggolaanaysaa inaan kumanaan idaacadood ka helno saldhigyada adduunka oo dhan waxayna na siisaa hage dhammaystiran dhammaan barnaamijyada.
Waxa ugu fiican oo dhan, adeegani waa gabi ahaanba waa bilaash waxaana lagu hayaa xayaysiis. Xayeysiinta ayaa la muujiyaa mar kasta oo aan gujinno kanalka aan rabno inaan aragno, maadaama uu aad u sarreeyo, waxay nagu qasbi doontaa inaan adeegsanno biraawsar leh xannibaad xayeysiis haddii aanan doonayn inaan luminno tirada badan ee tabyada soo bandhigay.
Ka shaqaynta biraawsarka, waan awoodnaa ku shub waxyaabaha ku jira Chromecast TV kasta oo ku habboon. Dhammaan waxyaabaha uu Photocall.TV soo bandhigo waxaa si toos ah looga helaa bogagga shabakadaha kanaallada si toos ah uga baahiya internetka, sidaa darteed wax dhibaato ah naguma yeelan doono tayada dib -u -gudbinta.
Eeg La 1, La 2, Qabiil, Teledeporte iyo Kanaalka 24 saacadood
Haddii aad rabto inaad aragto La 1, La 2, Qabiil, Teledeporte ama kanaalka 24-ka saac ah, waxaad ku samayn kartaa gabi ahaanba lacag la'aan adoo adeegsanaya arjiga RTVE Play. Codsigan dhexdiisa, kaliya ma heli karno baahinta tooska ah ee hay'adda dadweynaha, laakiin sidoo kale waan awoodnaa geli dhammaan bandhigyada TV -ga iyo taxanaha waxaa baahiyay telefishinka dadweynaha Isbaanishka.
Maaddaama ay tahay telefishan dadweyne, oo ka duwan kanaalada gaarka loo leeyahay, uma baahnin inaan is -diiwaangelino si aan u isticmaalno arjiga, way noo oggolaanaysaa soo dejisan content si aad u aragto iyada oo aan lahayn xiriir internet oo aysan ku jirin nooc kasta oo xayeysiis ah oo ka baxsan kan laga yaabo in uu baahiyo kanaalkan oo xayeysiinaya barnaamijyadiisa.
In kasta oo arjigu uusan qaadin boos badan, haddii aan ku yar nahay meel bannaan oo lacag la'aan ah aaladdayada, waxaan haysannaa ikhtiyaarka ah inaan helno dhammaan waxyaabahaan si toos ah u booqanaya mareegaha iyada oo loo marayo biraawsar, nooca shabakadda oo na siineysa marin u helka isla waxyaabaha laga heli karo arjiga.
Developer: Warbaahinta Isdhexgalka RTVE
Eeg Telecinco, Cuatro, Factoría de Ficción, Boing, Energy, Divinity iyo BeMad
Helitaanka dhammaan kanaalada qayb ka ah kooxda Mediaset waa sida fudud sida rakibidda codsiga Mitele, laga heli karaa bilaash si looga soo dejiyo Dukaanka Play. Codsigan wuxuu noo oggolaanayaa inaan helno baahinta tooska ah ee mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah kanaalada ay kooxdan telefishanku si toos ah u baahiyaan.
Laakiin marka lagu daro, sidoo kale way noo oggolaaneysaa marin u hel dhammaan qaybaha taxanaha oo dhan ee ay baahisay dhawaanahan dhammaan kanaallada ka tirsan kooxdan. Si loo helo dhammaan waxyaabahaan, waa qasab in la isdiiwaangeliyo si loo isticmaalo arjiga, codsi xayeysiis ka buuxo.
Mitele ayaa sidoo kale laga heli karaa shabakadda, sidaa darteed waxaan sidoo kale ku heli karnaa dhammaan waxyaabaha ku jira madalkan iyada oo loo marayo biraawsar. Si aad toos ugu daawato baahinta, uma baahnid inaad isdiiwaangeliso, laakiin waxaad u baahan tahay inaad gasho nuxurka baahinta.
Mitele - TV dalbasho
Eeg Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Mega iyo Atresseries
Haddii aan dooneyno inaan helno baahinta tooska ah ee kooxda Atresmedia, kooxda ay ka tirsan yihiin kanaallada Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Mega iyo Atresseries, waxaad ku sameyn kartaa codsiga ATRESplayer ee Android, codsi noo oggolaanaya si aad u hesho dhammaan waxyaabaha laga sii daayo kanaaladan, laga bilaabo barnaamijyada ilaa taxanaha qaranka ilaa kuwa caalamiga ah.
Si ka duwan dalabka RTVE Play, tan nagama ogola inaan soo dejisanno nuxurka si aad ugu raaxaysato markaannaan lahayn xiriir internet. Intaa waxaa dheer, waxay nagu qasbeysaa inaan is -diiwaangelinno si aan u helno dhammaan waxyaabaha ku jira oo tirada xayeysiisyada ay muujineyso ay aad u sarreeyaan marar badanna waxay ka qaaddaa rabitaankii ahaa inaan sii wadno daawashada kanaaladaas.
Sida dalabka RTVE Play, haddii meesha kaydinta ee aaladdayadu ay yar tahay, waxaan geli karnaa waxa ku jira laga heli karaa mareegahaagamaadaama ay isku mid tahay oo laga heli karo app -ka, oo ay ku jiraan isla xayeysiisyo foolxun oo isku mid ah.
ATRESplayer: Taxanaha iyo wararka
Rakuten TV waa madal telefishan oo socda leh in ka badan 80 kanaalIn kasta oo badidoodu ay ku qoran yihiin Ingiriis, haddana waxaan ku heli karnaa qaar badan oo Isbaanish ah. Rakuten TV wuxuu abaabulaa kanaallada mawduuc ahaan, sidaa darteed helitaanka nooca waxyaabaha aad ugu jeceshahay waa sida ugu fudud ee helitaanka kanaalka saxda ah.
Madalkan waa la heli karaa iyada oo loo marayo shabakadda iyo iyada oo loo marayo Samsung iyo LG TV -yada caqliga leh. Mustaqbalka, sidoo kale waxaa lagu heli doonaa iyada oo loo marayo dalabka jira ee madalkan, codsi noo saamaxaya inaan helno filimada lacag la’aan marka lagu daro suurtagalnimada kireysiga iyo iibsashada filimada.
Adeegga telefishanka ee bilaashka ah waa la hayaa iyada oo ay ugu mahadcelinayaan xayeysiisyada lagu muujiyey qaab xayeysiis ah annaga oo ku raaxaysanayna waxa ku jira madal iyo diiwaangelin ayaa loo baahan yahay si loo helo madal. Tani waa sababta oo waxay noo oggolaanaysaa inaan kiraysanno oo aan ku iibsanno filimo hal gujin ah.
Pluto TV waa mid kale oo ka mid ah aaladaha telefishinka ee gebi ahaanba bilaashka ah oo kaliya ku baahin kara internetka. Si ka duwan Rakuten, Pluto TV ayaa na siisa marin u helidda in ka badan 40 kanaal mawduuc, dhammaantoodna ku qoran Isbaanishl. Si aad u hesho madalkan, muhiim ma aha in la isdiiwaangaliyo waxaanan ka samayn karnaa aalad kasta oo moobaylka ah (IOS, Android), PlayStation, Xbox, Smart TV ...
Madalkan waxaa xayaysiiya xayeysiisyo, xayeysiisyo lagu muujiyey 15-daqiiqo oo kala goyn ah inta aan daawaneyno waxyaabaha la heli karo.
Pluto TV - Filimada iyo Taxanaha
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Mobdro ma shaqeeyo, kuwani waa beddellada ugu fiican
Sidee si geesinimo leh loogu qoraa Facebook-ga
Internetku wuu gaabiyaa: sababaha iyo talooyinka lagu hagaajinayo